Macluumaadka Shirkadda - Linyi Guoshengli Qalabka Baakadaha Co., Ltd.
Ku takhasusay Baakadaha Gaaban ee Is-bedbeddeli Kara in ka badan 20 Sanno
Linyi Guoshengli Baako Waxyaabaha Co., Ltd. waa shirkada hoosaad ee Linyi Guosheng Color Printing and Packing Co., Ltd oo la aasaasay sanadkii 1999 bilowgiisii. Waxaan nahay shirkad tayo sare leh oo loo habeeyay baako dabacsan, oo ku takhasustay filimka rooga ah iyo boorsooyin horay loo soo saaray oo wax soo saar ka badan 20 sano. Maaddaama shirkad daabicis ah oo jilicsan iyo shirkad beddeleysa, waxaan ku siineynaa xalalka baakadaha ee daabacaadda 10-midab ee noocyada kala duwan ee cabbiraadaha filimka iyo ballacyada. Laga soo bilaabo naqshadeynta illaa beddelaadda, waxaa naga go'an inaan bixinno adeegyo hal-joogsi ah oo leh is-gaarsiin ku habboon oo xirfad leh.
Alaabada tayada sare leh waxay ka yimaadaan xarumaha horumarsan. Waxaan maalgashi ku sameeynaa mashiinno otomaatig ah geedi socodka wax soo saarka buuxa si aan u soo saarno una daabacno alaabooyin badan oo baakadaha rogrogmi kara. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ku kasbannay sumcadda warshadaha soo saarista baakadaha dabacsan ee u qabta si la isku halleyn karo oo joogto ah.
Baakadaha Guoshengli waa wehelkaaga adeegga baakadka dabacsan ee adeegga buuxa. Hadafkeenu waa in la abuuro xalalka baakadaha ku saleysan suuqa iyo macaamiisha si loo kobciyo astaantaada oo looga caawiyo sumaddaada inay sii xoogeysato. Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo gaar ah ama aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan helitaanka xirmo jilicsan oo ku habboon alaabtaada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir annaguna waan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno.
Isku Darso Awoodaha Guoshengli si aad fikraddaada ugu soo bandhigto nolosha
10-Midab Mashiinka Daabacaadda Xawaaraha Sare ee Rotogravure
Waxaan leenahay gebi ahaanba 6 mashiinada wax lagu daabaco. Baaxadda ugu badan ee daabacaddu waa 1300mm. Dijital, otomaatig ah, xawaare sare, oo u qalma dhammaan noocyada qalabka daabacaadda.
Mashiinka Laminating Xawaaraha Sare ee otomaatiga ah
Ballaadhkeeda ballaadhan ee waxtar leh waa 1300 mm, taas oo ku habboon dhammaan noocyada xuubka substrate-ka waxayna soo saari kartaa noocyo kala duwan oo xuub isku dhafan oo aad u fiican, sida filimka caabbinta kuleylka, caabbinta saliidda, caqabadda sare iyo iska caabinta kiimikada.
Mashiinka Xawaaraha Sare
Ballaadhkeeda ugu weyn ee ballaadhkeedu waa 1300 mm iyo ballaca ugu hooseeya ee 50 mm, hannaanka goynta ayaa si dheer u goynaysa waxyaabaha isku duuban ee ballaca weyn u galaya qaybaha hoose ee loo baahan yahay iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah.
49 Nooc oo ah Mashiinno Beddelaya oo Casri ah
Waxaan haynaa wadar ahaan 49 nooc oo mashiinno beddelaya, soo saarista noocyo kala duwan oo jawaano ah iyo boorsooyin leh waxyaabo kala duwan sida aluminium bir ah, caag, warqad gacmeed, iwm.
Shirkadeena waxaa lagu qalabeeyay aaladaha tijaabada ugu dhameystiran ee warshadan, waxayna sameysay sheybaar madaxbanaan oo ganacsi, kaas oo bixiya taageero aqooneed oo awood leh iyo dammaanad qaad hardware ah oo loogu talagalay wax soo saarka tayada sare leh.
Qalabka Daaweynta Gaaska Qashinka ee ITO
Waxaan marwalba fiiro gaar ah siineynaa ilaalinta deegaanka, iyo soo dejinta gaaska qashinka ITO iyo qalabka daaweynta ee Spain.